Saripika: misokatra ny fifaninanana sary “portrait” | NewsMada
Saripika: misokatra ny fifaninanana sary “portrait”
Par Taratra sur 02/02/2019
Sehatra manome lanja sy mampiroborobo ny tontolon’ny saripika, maneran-tany mihitsy, ny LensCulture. Marobe ny fifaninanana karakarainy, izay misokatra amin’ny mpaka sary avy amin’ny vazan-tany efatra. Ho an’ity indray mitoraka ity, miantefa amin’ireo matihanina, mahafehy tsara ny lafiny rehetra eo amin’ny fakana sary, toy ny teknika sy ny fahaizana manasongadina ny mahakanto ilay sary, ny fifaninanana.
Toy ireo fifaninanana rehetra efa nokarakarain’ny LensCulture, misy lohahevitra manokana ny amin’ity. Tokony haneho sariolona na “portrait” ilay sary alefa hifaninana. Amin’ny maha iraisam-pirenena ny fifaninanana, misokatra ho an’ny Malagasy matihanina amin’ny fakana sary ihany koa izany.
Ankoatra ny fanomezana vola, maromaro ny tombony ho azon’izay mendrika indrindra amin’ity fifaninanana ity, toy ny fampirantiana ny asany any amin’ny Aperture Gallery any New-York sy ny fandraisana anjara amina « festivals » momba ny sary ary ny fampahafantarana ilay sanganasa mendrika ao anatin’ny bokin’ny LensCulture.
Ankoatra ireo, manome sehatra iray ahafahan’ny mpanakanto mpaka sary mahafantatra ny lentan’ny fahaizany ihany koa ny mpikarakara ity fifaninanana ity. Azon’ny mpandray anjara atao ny mangataka tsikera mikasika ny sanganasany. Izany dia ahafahany manatsara hatrany ny zavatra ataony.